"Pep Guardiola Nasiib Ayuu Ku Badbaaday, Waxay Ahayd In Manchester City Ay Erido" - Gool24.Net
“Pep Guardiola Nasiib Ayuu Ku Badbaaday, Waxay Ahayd In Manchester City Ay Erido”
Pep Guadiola nasiib ayuu ku badbaaday oo uu wali kusii hayaa shaqada, sababtoo ah, haddii uu qof kale ahaan lahaa Manchester City waxay hadda ka caydhin lahayd shaqada tababarenimada. Sidaa waxa rumaysan khabiirka ciyaaraha ee Paul Merson.
Khabiirku waxa uu amaanay shaqada uu Liverpool ka qabtay Jurgen Klopp, waxaanu barbar-dhig ku sameeyey waxqabadka Pep Guardiola iyadoo uu tilmaamay inay isku yihiin mid fashilan oo ay ahayd in shaqada laga caydhiyo iyo mid guuleystay.
“Pep Guardiola nasiib ayuu leeyahay in ilaa waqtigan uu sii hayo shaqada, sababtoo ah, haddii uu ahaan lahaa qof kale, Manchester way caydhin lahayd xilligan. Xili ciyaareedkan, waxa uu gebi ahaantiiba u ahaa musiibo, tababare Guardiola na, waa macallinka kaliya ee kubadd shaqadiisa ilaashada kaddib isaga oo si xun u fashilmay.” Ayuu yidhi Paul Merson.
Manchester City ayuu Paul Merson sheegay in xili ciyaareedkii tegay ay 20 dhibcood ka dambaysay Liverpool, ayna usii raacday guul-darro xanuun badnayd oo kasoo gaadhay tartanka Champions League, waxaanu yidhi: “City waxay ku dhamaysatay 20 dhibcood iyadoo ka dambaysa Liverpool. Waxa Champions League kasoo reebtay koox kaalinta TODDOBAAD kaga jirta Faransiiska. Waxay ku guul-darraysteen semi-finalkii FA Cup, waxaana soo raabay gacan-yarihiisii. Waa caadi inay ku guuleysteen League Cup. Waxay haystaan koox dhamaystiran. Boos kasta waxa jooga ciyaartooyo qiimahoodu yahay £50 milyan oo Gini.”
Khabiirka ciyaaraha ee Merson oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa raaciyey: “Qof kasta oo kale waa la eryi lahaa, laakiin wali wuu sii joogaa sababtuna waa sumcaddiisa. Waxay is leeyihiin, bal eega, Guardiola wuxuu soo laaban doonaa xili ciyaareedka dambe, waxaanu ku guuleysan doonaa wax badan. Laakiin anigu shaki badan ayaan ka qabaa inuu guuleysan doono.”